naag lawasaayo - iftineducation.com
iftineducation.com – Ilo gaagaaban oo ku sugan khabiirinta ku xeel dheer dhanka ciyaarta sariirta ayaa sheegay in ilaa iyo afar arimo aysan raggu badan kood ka helin xilliga sariirta arrimahaa aya u arkaan in ay qalad ku yihiin in haweeneydu ku kacdo xilligaa afarta xilli ayaa ka mid ah.
1- In haweeneydu iyado ku hor marto rabitaanka ninkeeda xilliga sariirta ama ay isku daydo in ay darawal ka noqoto ciyaarka gaaban ee lagu qabto sariirta waayo ragga waa ay ka duwan yihin haweenka ragga badan koodna kama helaan arintaasi.
2- Raggu badankoodii ama kulligooda aan iraahdee kama helaan xilliga ciyaarta in wax laga sheego Difaaca ku howlan ciyaarta sariirta tusaale (in uu gaaban yahay ama uu cilad leeyahay oo kale in la sheego).
3- Dhunkashada Zaa’idka ah: Dhunkashada saa’idka ka ah raggu sida anigoo kala ah kama helaan waayo dhunkashada ilaa ay raggu neefsan waayaan la gaarsiiyo waxay noqoneysaa mida macaansi dumarka u gaar ah taa oo ay raggu badan kood ka hleon marka iska hubi in uu ninkaaga ka helo iyo in kale.
4- Raggu waxa kale aysan ka helin gaar ahaan ragga guursaday garoobada in loo soo hadal qaado ninkii horay kuu qabi jiray waa wax ay aad uga xanaaqaan ragga oo ay isleeyihiin sharaf xumo ayay kuu tahay amaba waxaa ka macaan badnaa kii hore marka waxaa dhici karta in shaqado uu wado uu joojiyo ama uu ka xoojiyo inta uu markaa waday oo ay adiguna dhibaato kaaga imaado so iska ilaali in aad soo hadal qaado ninkaagii hore xilliga ciyaarta.